Ike-Chuanghe Fastener Co., Ltd
Factorylọ ọrụ Chuanghe dị na Dalang, dịka ọrụ igwe si dị, a na-ekekwa ụlọ ọrụ anyị nke ngalaba ngalaba na-ajụ oyi, ngalaba isi nri, CNC akpaka na ngalaba ndị ọzọ. Anyị nwere ike iji aka ha wepụta iberibe ngwa ngwa dị elu nke ihe dị iche iche, akụkụ na nkọwapụta. A na - ebubata ngwa ahịa niile si Taiwan na Japan iji hụ na arụmọrụ dị mma. Ngwa ọrụ nhazi ahụ na-arụ ọrụ mmezi kwa ọnwa, yabụ na-ahụ na ndụ ọrụ na arụmọrụ ngwa ọrụ niile.
Nnyocha ụlọ nyocha dị mma Iji hụ na ngwakọta nke ngwaahịa ọ bụla na-emezu ihe ndị ahịa chọrọ, CHE na-arụ ọrụ ụlọ nyocha pụrụ iche na ndị na-anwale iji chịkwaa njikwa nke usoro nke ọ bụla site na nnwale akụrụngwa ruo ule nyocha.
Chuanghe Fastener bụ otu n'ime ndị nrụpụta ihe nke akụkụ ngwaike Automotive, akụkụ CNC, Screw, Bolt na akụ na DongGuan obodo, GuangDong n'ógbè, China. Na ISO9001: 2008, ISO14001: 2004 na ọkachasị IATF16949: 2009 asambodo maka ụlọ ọrụ aotumoilbe.
IME IMEONU IME CHE nwere ndi otu oru mejuputara ndi asusu ọtutu asusu. Ha na-ahụ maka ịgbaso ịre ahịa ma rụchaa ọrụ azụmaahịa iji mezue nkwukọrịta na nhazi nke ndị ahịa. AJJ QU AH QUR EBURU N'ịchọpụta izizi na ịdị adị nke usoro a si wee mepụta, anyị na-eji usoro ERP aka ịchịkwa usoro usoro iji, site na CHE maka ịdịzị ngwaahịa ikpeazụ.